Mozika ho an'ny fahavoazana
Ny olona iray dia tsy manan-danja fotsiny amin'ny fihinanana sakafo, hanomezana fahafaham-po ny hanoanana ara-batana, fa koa hankafy mozika, raha mahafa-po ny hanoanana ara-tsaina. Ankoatr'izay, isika rehetra, eny fa na dia ireo elefanta ao an-tsofiny aza, dia tsy vahiny amin'ny fahatsapana rhythm. Izany no nanosika ireo mpahay siansa hampiasa mozika mba tsy hanan-danja intsony.
Ny iray amin'ireo oniversite any Montréal dia nanao fikarohana maro, mijery ny atidohan'ny mpilatsaka an-tsitrapo rehefa mihaino mozika. Ny asany dia izao manaraka izao: esory ny atidoha rehefa mihaino mozika izay nankafizin'ilay mpilatsaka an-tsitrapo, avy eo dia andramo ny atidoha eo ambany fitarihan'ny mozika tsy mitongilana, ary avy eo dia aleony miala amin'ny mozika tsy mitongilana. Vokatr'izany, nandritra ny "mozika" ankafiziny, ny famokarana dopamine, ny hormone ny fahasambarana, dia nitombo ho 9%.
Ny fihenam-bidy amin'ny mozika, araka ny filazan'ny mpahay siansa, dia tokony hanao fihetsika tsy misy fepetra, satria mihaino ny hira tianao indrindra tahaka ny sôkôla mihinana - kely kely mangovitra eo amin'ny hoditra sy tsipìka goose any aoriana. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia fanehoana ivelany manintona indrindra ny fahafinaretana.
Tracklist fa tsy cake
Ilaina ny mahatsapa fa ny mozika mandray anjara amin'ny fahavoazana dia tsy mampihena ny votoatin-tsakafo kalorie, tsy mandoro hena , tsy manamaivana ny metabolisma. Mizara sakafo ny mozika raha, noho ny korontana ara-pihetseham-po, ny fahasorenana, ny fahalavoana, dia mianika ao anaty vata fampangatsiahana isika mba hisamborana "alahelo". Izany dia manampy antsika hahay handanjalanja, hampiato ny fahasalamantsika ara-tsaina, ary hanilika tanteraka ny fisisihan-javatra tsy misy dikany sy mampidi-doza.
Inona no tokony ho mozika?
Mozika ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana - tsy mitovy amin'ny fampiasana mozika ho an'ny fahavoazana mavesatra. Amin'ny tranga voalohany, ny tanjonay dia ho tony, haka aina, ary hionona. Amin'ny faharoa - mankalazà, ampandrenesina energie, mitsambikìna ambony ary mihodina ambany. Ny mozika ho an'ny fahaverezan'ny lanjany dia tsy mozika ho an'ny fananana, mozika izay ahafahanao misaintsaina.
Ny fitambarana dia tokony ho fitaovana fotsiny, satria ny firaiketam-po amin'ny teny dia hanelingelina antsika, ary hanome antsika sakafo fanampiny ho an'ny atidoha. Tianao ny mozika .
Raha vao vita ny famaranana fa manampy amin'ny fampihenana ny lanjany ny mozika, ny spa dia nampiarahina avy hatrany io fomba fitsaboana io. Ankehitriny ao amin'ny salon dia misy fotoana ahafahana misaintsaina ny mozika ho an'ny fahavoazana mavesatra, ary mandritra ny fialana aina, dia hanao fitsaboana spa maro ianao.
Na dia eo aza ny fandinihan'ireo mpihaino an'io fihetsika manararaotra io amin'ny fomba fitenenan-kibo avo lenta kokoa, dia mbola tsy mandà fa rehefa mihaino mozika ihany koa izy dia tsy mahatsapa afa-tsy ny fahatsapana hanoanana, fa koa ny fotoana, ny herin'ny fahamalinana sy ny fahatsapana ny tany.
Manolotra lisitry ny mozika maoderina sy mozika maoderina isika izay afaka mampihena ny fiankinan-doha, noho ny famokarana ny hormone ny fahasambarana - endorphine:
Johann Pachelbel - Canon ao amin'ny D major
Antonio Vivaldi - Winter (avy amin'ny andiany "The Seasons")
Jon Schmidt - Ny ahy rehetra
Goran Bregovic - Tango ambanin'ny tany
Edward Grieg - maraina (avy amin'ny efitranony "Per Gynt")
Yiruma - mikoriana ao anatinao ny renirano
Pyotr Tchaikovsky - Concerto ho an'ny piano sy orkestra No. 1
Ny andro iraisam-pirenena - Izaho dia diso
John Williams - Lohahevitra avy amin'ny lisitry Schindler
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto ho an'ny piano No. 23, Adagio
Hans Zimmer - Fotoana
Johann Strauss (lahy) - Ao amin'ny Danube manga tsara tarehy
Johann Strauss (ray) - Marsh Radetsky
Sergei Rachmaninov - Prelude ao amin'ny C Sharp Minor
Peter Tchaikovsky - Pas de deux avy amin'ny ballet The Nutcracker
Joe Hisaishi - Moving Castle of Howl
Gustav Mahler - Fahaefatry ny Symphony faha-8
Ny fomba hifidianana hazo ho an'ny fandehanana any Nordic - ny zavatra tokony ho fantatrao amin'ny safidy tonga lafatra
Fitsipika momba ny lalao baseball
Fanatanjahantena tsy mahazatra
Asparks amin'ny fanatanjahantena
Fanatanjahantena ho an'ny ambiny amin'ny osteochondrosis
Ahoana no hianaranao hiady?
Famaritana mikasika ny fahasalamana
Pippa Middleton sy James Matthews dia tsy ela dia tonga ray aman-dreny
Rackets amin'ny zaza
Apetogram momba ny cockatoo - ahoana no hitazonana izany?
Ny familiana ao amin'ny multivark
Ahoana no hampifangaroana tapakila ao amin'ny efitrano fandriana?
Emilia Clark dia nividy trano fonenana tany California tamin'ny 4.64 tapitrisa dolara
Wen amin'ny loha
Fambolena voanio (bulbochki)
Tulle mankany amin'ny efitrano fandriana
Fandevenana trano fandroana - ahoana no fomba fidinao sy anaovana ny trano anatiny?